Israely: Fanafihana tamin’ny bilidaozera fahatelo tao Jerosalema tao anatin’ny herintaona – 2009 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Mey 2021 5:04 GMT
Nitatitra ny toa fanafihana tamin'ny bilidaozera fahatelo nataon'ny mpampihorohoro tao anatin'ny valo volana farany ny vaovao Israeliana androany. Nifaoka fiara fitateram-bahoaka sy fiaran'ny polisy iray tamina bilidaozera teo amin'ny sampanan-dalan'ny Menachem Begin sy teo amin'ny Làlana Golomb any Jerosalema ny mpamily Mir'i Radeideh. Hoy ny loharanom-baovao avy amin'ny Jerusalem Post:
Notantarain'ireo nanatri-maso ny tranga mahatsiravina nahitana ilay bilidaozera nirifatra teny an'arabe, nitaritarika ny fiaran'ny polisy, nanipy azy ambony ary nikasa hanapotika azy tamin'ny lelany teo aloha.
Hita ao amin'ny tranonkala ny rakitra misy ny horonantsary sy ny fakantsary mpanara-maso ary ny andian-tsary mampiseho ny tranga.
Polisy roa no “naratra kely” ary maro ny olona teny an-toerana, izay nisy ankizy maro, no naiditra hopitaly noho ny hatairana. Voatifitra ilay mpamily.
Radeideh, 26 taona, nanambady, mananjanaka zazavavy kely. Tompon'ny bilidaozera ary mponina tao Beit-Hanina any Jerosalema Atsinanana sady mihazona pasipaoro Palestiniana. Nilaza ny fianakaviany, izay nanontaniana avy hatrany taorian'ny zava-nitranga, fa mpivavaka sady tsy liana tamin'ny politika fampihorohoroana i Radeideh. Hoy ny reniny tao amin'ny fahitalavitra Israeliana:
Miandry ny fiverenany an-tanindrazana izahay… fivavahana ihany no mahaliana azy, tsy fantany izany fanafihan'ny mpampihorohoro izany, tsy mahaliana azy izany.
Nilaza ny fianakaviany iray hafa fa “olona salama saina tsara tsy nanana hevitra mahery fihetsika” Radeidah.
Tamin'ny volana Jolay 2008 no niseho ny fanafihana roa voalohany tamin'ny bilidaozera, izay nahafatesana olona miisa 3 ary 48 no naratra. Samy mponina tao Jerosalema Atsinanana ireo mpamily ny fiarabe.
Nanomboka naneho hevitra ny tontolon'ny bilaogy Israeliana raha vao nambara ny vaovao. Naverin'i David Bogner, bilaogera ao amin'ny Treppenwitz ny lohatenin'ny BBC ” Mpamily bilidaozera voatifitra tao Jerosalema,” tao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Amin'ny alàlan'ny solomaso milokon'i Keffiyeh,” ary hoy izy nanoratra:
Fanamarihana ho an'ny Jiosy any Angletera: Inona no andrasanao? Vonjeo ny tenanao dieny mbola azonao atao!
Nanamarika ny fitoviana tamin'ny vokatr'ireo fanafihana telo ireo i Jameel ao amin'ny The Muqata.
Fanafihana bilidaozera faha-3 tao Jerosalema hatramin'ny taondasa, miampy fanafihana tamin'ny fiarabe manapotika teo akaikin'ny Làlana Jaffa, sy ny fanafihan'ny mpampihorohoro tao Merkaz Harav. Amin'ireo tranga rehetra voalaza etsy ambony ireo dia nandray anjara mavitrika tamin'ny tsy fanetsehana ilay mpampihorohoro ny sivily.
Nanaraka ny raharaha araka ny voalaza i Yael, avy ao amin'ny Aliyah! Step-By-Step. Naveriny fa voasakan'ny andrinjiro nandry tamin'ny tany ilay mpamily ilay bilidaozera izay nanelingelina ny làlany. Toa ny mpamily fiarakaretsaka no namarana ny diany, izay nitifitra voalohany mba hampiato azy. (Mbola samihafa ny filazan'ny fampitam-baovao momba ny antsipiriany fa mbola hisy ny vaovao misimisy kokoa tsy ho ela.)
Nanoratra i Yael:
Raha mihaino ny onjam-peo, miova isaky ny dimy segondra ny antsipiriany momba ilay fanafihan'ny mpampihorohoro nitranga tao Jerosalema iray ora lasa izay … Niezaka nanosika ilay bisy nisy olona, izay zazavavy kely maro manao akanjo Pourim, an-dàlana mba hampifaly ny marary ao amin'ny Hopitaly Hadassah amin'ny fety, ilay traktôpelina,.
Soa ihany ho an'ireo ankizy, ny andrinjiro nihohoka teo amin'ny tany no nanakana ilay trakitera lapela tsy hampivadika ny bisy. Ilay andrinjiro izay teny an-dàlana no nanome fotoana ho an'ireo zazavavy mpianatra hivoaka ny bisy hiala ny toerana. Nilaza ny Komandin'ny ZAKA, Haïm Weinrot, fa “nihikiaka ireo zazavavy ireo. Hitan'izy ireo nanatona azy ireo ilay lelamby goavambe ary nihevitra ho faty izy ireo, saingy voavonjin'ilay andrinjiro tamin'ny ora farany.” Ankizy maromaro no notsaboina noho ny hatairana tamin'io fotoana io.
Ho setrin'ity fanafihana fanintelony ity, nandinika ny antontan-taratasin'ireo mpamily sy ny tompon'ny bilidaozera rehetra manodidina an'i Jerosalema ny polisy. “Tsy ity no karazana fanafihana noheverintsika hosakanana mialoha,” hoy ny iray tamin'izy ireo.
Jereo ny lahatsoratra hafa mifandraika amin'izany: